Isasasa ngomdlalo weyeLANGA - Ilanga News
Home Impilo Isasasa ngomdlalo weyeLANGA
Intsha iyehluleka wukulinda izinsuku zokudlala ngenxa yokuwuthanda
LIKHULU isasasa engxenyeni yentsha yaseSunshine naseLower Luganda, eMariannhill, entshonalanga yeTheku ngomdlalo osungulwe nguMhleli weziNdaba weLANGA, uSazi KaSipho Majola.
Le ntatheli esimnkantshubomvu, isungule umdlalo obizwa ngeNhungu – okusho isi-8 ngeXitsonga – okungewona owokuqala njengoba ngowe-1997 isungule odlalwa oqwembeni, obizwa ngeMajolian Shoot-out (Majshou). Ngowezi-2007 uvivinywe njengomdlalo wasenkundleni.
Mhla zili-16 kuZibandlela (December), isungule obizwa ngeKarma, odlalwa oqwembeni nokho ongakaqali ukudlalwa ngenxa yokuthi uMajola uthi usabhekene neNhungu.
INhungu – enamatemu amaningi ezomkhathi (astronomy) – uyisungule ngoMasingana (January) nonyaka, kanti intsha eningi lapho ehlala khona, iyehluleka wukulinda izinsuku edlalwa ngazo – isijahe ukuyodlala.
Uthi okumenze wasungula lo mdlalo wukuthi yiningi intsha engenzi lutho endaweni futhi unesifiso sokujwayeza intsha empisholo yasemalokishini nasemakhaya i- astronomy.
Uveze ukuthi kuyamkhathaza ukubona izingane endaweni ziwuvanzi, okungazenza zigcine ziwele ezidakamizweni – okuyinkinga evalile emalokishini amaningi – bese izwe lilahlekelwa ngabaholi bakusasa.
“Miningi imidlalo kodwa kubukeka bebaningi abantu abafuna into entsha, ezobanika inselelo entsha. Ziningi izingqinamba njengoba sidlala.
“Kwesinye isikhathi ngike ngizibuze ukuthi kungani ngimosha isikhathi sami nemali yezingane zami ngokuqhuba lo mdlalo kodwa ngibuye ngigqugquzelwe yindlela abadlali abakukhuthalele ngayo ukudlala iNhungu.
“Njengoba umdlalo owodwa weNhungu ungathatha ngisho ngaphezulu kwamahora amathathu, abadlali babuye babulawe yinkemane bese kufanele nginyakaze njengendoda,” kusho uMajola othi ingqinamba enkulu yizindleko zokuqhuba lo mdlalo nendawo kwazise “siyibanga nelinye iqembu likanobhutshuzwayo lasendaweni elingafuni kuzwa lutho ngayo”.
Uthi ngaphandle kokusiza intsha ukuba iqoqeke futhi ihlale ithokozile, lo mdlalo ungasiza nabadlali bakanobhutshuzwayo ukuba bakwazi ukushaya amagoli ezindaweni ezinika onozinti ubunzima, ungasiza nabombhoxo kakhulukazi abakhahlela amaphenathi namaconversion.
Uveze ukuthi lo mdlalo uvuleleke kubona bonke ubulili kanti kuyimanje uqeqesha indodakazi yakhe, uNozuko Sazi Majola Ngabayena ukuba yiLuhman 16 A – LA (unompempe wokuqala kwazise owesibili yiLuhman 16 B – LB).
“Into ejabulisa kakhulu umdlali cishe kuyona yonke imidlalo, kakukhona ukuthi ujike abantu noma ugudluze izitha ezingaki kodwa kuba wukuthi ushaye amagoli amangaki. Le njabulo igqama emehlweni omdlali weNhungu oyiSupernova uma ehlohla amagoli epalini lesi-6 (Saturn) nelesi-8 (Neptune) kanti lo osuke emjaha (oyiComet), ujabula afe uma eke wamfica engakadluli kuSaturn – kwazise yiwona mapali anzima,” kusho uMajola.
Uthi angajabula uma izikhulu zingasondela kulo mdlalo kwazise yinto yama-Afrika ebhekiswe emhlabeni wonke jikelele. Uveze nokuthi isifiso sakhe wu-kuba iNhungu ivivinywe kuma- indiginous game noma kwiSouth African Local Government Association (Salga) Games futhi ingene nasezikoleni. Usebenzise umuntu wendawo ukumshiselela amapali kanti uxoxa nenye insizwa yakho- na endaweni ukuba imsikele ijezi elehlukile kwaweminye imidlalo. Inkomishi yokuqala – okuyiyona ezoba nkulu kulo mdlalo – uthi angakuthokozela ukuba iqanjwe ngoninakhulu, uNkk Norah Mkhwanazi noNkk Beatrice Majola abamkhulisa ngokwehlukana. Ubonge nokwesekwa yiLANGA limgqugquzela ukuba angapheli mandla, ikakhulukazi uMhleli Omkhulu, uNkz Thobile Nxumalo nomphathi, uMnu Arthur Konigkramer nabanye ozakwabo.
Previous articleKunzima kubafundi abawela ngezinyawo
Next articleiSicelo se-Chiefs ngomgadli we-Downs